SPC Line Extrusion Line Environmental Floor - China SPC Environmental Floor Extrusion Line Supplier, Ụlọ ọrụ –Jwell
SPC n'ala extrude site PVC'S isi ihe nweta site anọ mpịakọta calender igwe, na ịkwanyere agba film + ịkwanyere yi oyi akwa + PVC ndabere nke akpụkpọ ahụ, ọzọ pịa na mado ndị a na fim na-ngwaahịa, mfe usoro, mezue mado na-adabere na okpomọkụ, e enweghị mgba.
SPC gburugburu ala extrusion akara uru
A-● Waterproof na wetproof, ọ nwere ike fundamentally dozie osisi ngwaahịa nsogbu dị ka mfe a ga-rotted na dilated deformation mgbe ịmịkọrọ mmiri ma ọ bụ na-emetụta mmiri gburugburu ebe obibi. Yabụ, enwere ike iji ụlọ WPC nke ụlọ ọrụ anyị ụdị ụdị a nke ngwaahịa osisi ọdịnala enweghị ike.
● Na-acha, ọtụtụ agba dị nhọrọ, enwere mmetụta osisi eke na ederede osisi, ma ị nwekwara ike ịhọrọ agba ị chọrọ dịka àgwà gị.
Protection Nchedo gburugburu ebe obibi, enweghị mmetọ, enweghị mmetọ, megharịa. Ngwaahịa anaghị enwe benzene na formaldehyde, ọ bụ ngwaahịa gburugburu ebe obibi, recyclability belata ojiji nke osisi, nke ahụ dabara maka mmepe na-adigide nke amụma mba yana ọ na-eritekwa ọha mmadụ uru.
Fire Ezi fireproofing. ọ nwere ike ịkwụsị ọkụ nke ọma, akara ọkụ ruru ọkwa B1, mgbe ọkụ metụrụ ngwaahịa, ọkụ ahụ ga-agbanyụ ozugbo, ma ghara iwepụta gas ọ bụla na-egbu egbu.
Easy maka echichi, adaba n'ihi na wok, mfe ewu ụzọ, azọpụta arụnyere oge na ụgwọ.
● ● ghara ịkụcha, agbasapụghị, ọbụghị nke ọdịdị, emezie ma dozie ya, ọ dị mfe ihicha, chekwaa mgbe emechara ya na ịkwụsị ụgwọ.
Biomass na ntụ ntụ ịnweta mmanụ mejupụtara bio-plastic PLA PBAT compounding line
、Kwanyere 、 eyi 、 Pee 、 PC 、 ABS Obere Profaịlụ extrusion Line
Ofdị agba Masterbatch Series